Nkwakọ ngwaahịa Ahịa Achịcha Site Innovation
N'ụwa nke nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa, ihe okike na ọganihu na-eduga mgbe niile na ihe ọhụrụ. Fọdụ n'ime usoro ọhụụ emeelarị ahịa site n'oké ifufe ma na-agbanwe etu ụlọ ọrụ si abịakwute ngwugwu nkwakọ ngwaahịa na usoro mbufe ha. Okwesiri iburu n'uche ...
Nkwakọ ngwaahịa bụ ihe dị mkpa: chee ụwa nke na-enweghị ya. Enweela ụdị ụfọdụ nke nkwakọ ngwaahịa ma a ga-enwe ya mgbe niile, mana enwere ụzọ anyị ga-esi kwụsị mmetọ mmetọ na ihe mkpofu sitere na mkpa ndị a nke ndụ? Ebee ka anyị ga-enweta akara na nkwenye ịnabata ...
Nkwakọ ngwaahịa compost: atụmatụ ahịa n'ọdịnihu
Mgbanwe nkwakọ ngwaahịa na-ebuwanye ibu ma na-ebute ugboro ugboro na nrụpụta ọhụrụ na ahịa zuru ezu, karịsịa ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji mee ka ngwugwu ha nwee mmekọrịta gburugburu ebe obibi. Otu ihe si na nke a pụta bụ nke ọhụrụ na-elekwasị anya na nkwakọ ngwaahịa compostable, na mbọ iji gosipụta comp ...